Nhanganyaya yaSuko Ptfe （Uhmwpe） Ram Rod Extruder - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE (polytetrafluoroethy) inowanzozivikanwa se PTFE, Teflon uye Plastic King. Iyo Teflon extruder muchina uyo unogadzira extruding PTFE (UHMWPE) zvigadzirwa.Uchishandisa nhevedzano yezvinhu zvakadai se extrusion, kudziyisa, uye kutonhora, iyo pre-sintered PTFE poda mbishi zvigadzirwa zvinogadziriswa negondohwe tsvimbo extruder kugadzira PTFE tsvimbo zvigadzirwa zvinosangana zvakasiyana siyana. Inokanganiswa nezvinhu zvinoenderana senge sekushandisa, maratidziro, zvigadzirwa, zvinoda mushandisi, nezvimwe, Suko anogona kugadzira uye kugadzira PTFE tsvimbo michina yemhando dzakasiyana. Iyo polytetrafluoroethylene (Ultra yakakwira mamorekuru uremu polyethylene) zvigadzirwa zvinogadzirwa negondohwe tsvimbo extruder zvinoshandiswa zvakanyanya mukemikari, zvekurapa, muchadenga, kugadziriswa kwemuchina, kupisa kupisa uye mimwe minda.
Suko ane makore mazhinji ekutsvagisa uye ruzivo rwekuvandudza mumunda wePTFE michina, inonyanya kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwePTFE michina. Midziyo yedu yakashanda nyika dzinosvika makumi mana nematunhu mumusika wepasi rose. Vatengi vedu vanobva kumaindasitiri ekurapa, eindasitiri yemuchadenga, maindasitiri emauto, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemotokari uye akasiyana maindasitiri epombi, uye Suko yave ichizivikanwa zvakanyanya neiyo yepasi rose fluoroplastic indasitiri.
Kambani basa: Kugadzira mhando yekutanga yePTFE michina. Suko akakodzera kuvimba newe.
1. MAITIRO PTFE, UHMWPE, RAM ROD EXTRUDER
PTFE tsvimbo extruder inogona kuenderera ichisunda tsvimbo uye tsvimbo inogona kutemwa maererano nezvinodiwa.
Iyo yakananga PTFE tsvimbo extrusion muchina extrudes kubva kumusoro kusvika pasi. Iyo michina yakaiswa papuratifomu kana pasi ine nzvimbo yekukwirira ingangoita 2.8 metres. Iyo inoshanda daro munzira yehurefu hwechigadzirwa inoda kutariswa, uye hurefu hwakakwana hunofanirwa kuve hwakavimbiswa pasi peyakagadziriswa denderedzwa gomba remuchina kuti riite zvinodikanwa zvehurefu hwetambo yakabviswa yePTFE.
Horizontal PTFE tsvimbo extrusion muchina inoda kufunga nezvedanho rinoshanda munzira yakatwasuka yemidziyo, uye zvinodikanwa kuti uone kureba kwetambo yePTFE. Iyo midziyo inosanganisira yeforoma kureba kwemamita 4-7 (kusanganisa hurefu hwetsvimbo yakapedzwa yakapera), hupamhi hwemamita 1.2, kukwirira kwemamita 1.8.
Muchina Floor nzvimbo (m2) 3.5 7 10
Cheka iyo yakadhonzwa PTFE tsvimbo kune inodiwa urefu.
7. ZVINODZIDZISWA NEZVIMWE ZVINotsanangurwa
8. NZIRA DZINOTUNGAMIRIRA
9. PASHURE PEKUTengesa BASA
10. PTFE ROD LINE ZVINOKOSHA ZVOKUDYA ZVOKUDYA
Bvisa otomatiki kudyisa, kusanganisira yakamanikidzwa mweya inodzosera kufuridza system, tanga kudyisa sisitimu, geza hosipaipi, yekukweva pfuti, vharuvhu jenareta, pcb controller, nzira 30-300 kg / h, dhayamita 150mm uye kukwirira 600mm, seta otomatiki yekudyara nguva uye inoburitsa nguva, hupfu kuyerera kunodzora, zvese zvinogadzirwa nesimbi isina chinhu, kutonga kwakangwara.
11. RELATED ZVINODA KUDZIDZA